အင်္ဂါနေ့, ဇူလိုင်လ 6, 2010 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 5, 2014 Matt Chandler
ပြခန်းပြပွဲ (WikiMedia Commons မှတစ်ဆင့်)
ငါမကြာသေးမီကအကြောင်းအရာ curation တွေအများကြီးလုပ်နေခဲ့ကြပြီ မင်းသိတယ်၊ ဒီဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်လမ်းကြောင်းသစ် အနည်းဆုံးတော့ဒါဟာဖက်ရှင်ကျမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဟာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာအလိုအလျောက်ပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းမှာလိမ်ဖဲ့ခြင်းပဲ။
Content curation သည်သတင်းနှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးပို့ရာတွင်အယ်ဒီတာအဖွဲ့အလွှာတစ်ခုကိုသတ်မှတ်သည်။ လူ့အယ်ဒီတာများသည်၎င်းတို့အသုံးပြုသူများသိစေရန်“ လိုအပ်သည်” ဇာတ်လမ်းများကိုရွေးချယ်သည်။ ၎င်းတို့သည်သုံးစွဲသူများသိလိုသည့် algorithmically ရွေးချယ်ထားသည့်အကြောင်းအရာဖြင့်ရေလွှမ်းမိုးရန်ဖြစ်သည်။
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်သူတို့၏တွစ်တာနှင့်တွစ်တာကိုပြန်လည်တင်ရန်တစ်ပတ်လျှင် ၁၀ ပုံကိုရွေးချယ်သည် Facebook က စာမျက်နှာများ။ ပုံပြင်များသည်ကုမ္ပဏီမှရောင်းချသည့်ထုတ်ကုန်များနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုမရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်ကုမ္ပဏီ၏စီးပွားရေးနယ်ပယ်နှင့်သက်ဆိုင်သောကြောင့်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်။ hackneyed ထားသောစကားစုကိုအသုံးပြုရန်အတွက် ၄ င်းသည်ဖောက်သည်များအားစိတ်ချရသောပြင်ပပုံပြင်များကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်“ value-add” ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်ပြီးအမှန်တရား၏အရင်းအမြစ်အဖြစ်တည်ဆောက်သည်။
Cue Google ကသတင်းများသူသည်အရှိန်မြှင့ ်၍ သူတို့၏သတင်းရလဒ်များအတွက်“ Editor Pick” အပိုင်းကိုစတင်စမ်းသပ်သည်။ Mashable မှာကြီးစွာသောပို့စ်တစ်ခုရှိတယ် ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကြောင်း, ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုအကျဉ်းချုပ်ဖို့ခွင့်ပြု: ကုမ္ပဏီကဲ့သို့သောထုတ်ဝေသူများနှင့်အတူပူးပေါင်းခဲ့သည် Slate.com, ရိုက်တာသတင်းဌာန နှင့် ဝါရှင်တန်ပို့စ် အကြောင်းအရာဖြန့်ဝေခြင်းကိုကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်အလိုအလျောက်ထုတ်ပေးသောသတင်းလင့်များနှင့်အတူလက်ဆင့်ကမ်းရန်လက်ဖြင့်ရွေးချယ်သည့်သက်ဆိုင်ရာပုံပြင်များဖြစ်သည်။
ဤတင်ပြထားသည့်အကြောင်းအရာသည်ပြည်သူလူထု၏အသိအမြင်မြင့်မားရေးအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ရပ်များကိုအာရုံစိုက်စေပြီးသတင်းတင်ဆက်မှုရှုထောင့်မှအဖိုးတန်ရုံသာမကအလိုအလျောက်ပါ ၀ င်သည့်လယ်ယာမြေများကိုလျစ်လျူရှုနိုင်သည့်အဖြစ်အပျက်များကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ Facebook Likes၊ တွစ်တာတွင်တင်ထားသည့် retweets နှင့်စသည်ဖြင့်မွေးဖွားလာသည့်အကြံပြုချက်များတွင်လည်းတန်ဖိုးရှိသည်။
တစ်စုံတစ်ယောက်ထိုင်။ ထိုပုံပြင်၏တန်ဖိုးကိုစဉ်းစားမိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသောအကြောင်းအရာ (curated) သည်ကျွန်ုပ်တို့အာရုံကိုဖမ်းယူထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသောပါတီ (ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook သူငယ်ချင်းများနှင့်တွစ်တာအဆက်အသွယ်များ) ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်ဖြစ်စေ (Slate သို့မဟုတ် Washington Post တည်းဖြတ်သူများ) မသိသည်ဖြစ်စေ၊ လူတစ် ဦး သည်ထင်ရှားသောနေရာချထားရန်လုံလောက်သောအရေးကြီးသောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုစဉ်းစားမိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိကြသည်။ ၎င်းသည်ယုံကြည်မှုနှင့်မည်သည့်ကွန်ပျူတာ algorithm မှမပေးနိုင်သောယုံကြည်မှုဖြစ်သည်။
ဤယုံကြည်မှုသည်သတင်းဖြန့်ဝေရုံမျှသာမကပါ။ ထုတ်ဝြေခင်းလုပ်ငန်းတွင်မပါ ၀ င်သောကုမ္ပဏီများသည် ၄ ​​င်းတို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အသိပညာတိုးပွားစေရန်နှင့်ရောင်းအားကိုတိုးမြှင့်ရန်အတွက်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်၍ သင်ကြားပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အကျိုးစီးပွားနှင့်ဆက်စပ်သောအရေးကြီးသည့်၊ အရေးကြီးသောသတင်းများကိုရွေးချယ်ရန်ကုမ္ပဏီ A ကိုလူတွေကသိလျှင်၊ အကူအညီအတွက်အကြံဥာဏ်များပင်ပေးသည်ဆိုပါကလူများသည်ထိုကုမ္ပဏီအားအကောင်းမြင်သည့်အမြင်ဖြင့်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ။
သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ? အကြောင်းအရာ curation ကျိုးနပ်လား? ဖောက်သည်များအပေါ်အဘယ်သက်ရောက်မှုများရှိသနည်း။ ကွာမှတ်ချက်ပေးပါ။
Tags: ဂူဂဲလ်Google Webmaster tools များjunk အီးမေးလ်စစ်ထုတ်ခြင်းအွန်လိုင်းငွေရှာလူမှုရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကို web စျေးကွက်ရှာဖွေရေး
14:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 5, 19
စာရေးသူအနေနဲ့ ၀ ယ်လိုအားဖြည့်တဲ့အခါ၊ သူကစဉ်းစားဟန်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိဖို့သေချာအောင်လုပ်ပါ။ အသိပညာတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ရောင်းအားမောင်းနှင်အကြောင်းကိုဂရိတ်အမှတ်။
- ချယ်လ်ဆီး Langevin
15:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 8, 45
ချယ်လ်ဆီးကိုဖတ်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာအရေးအပါဆုံးအချက်ကိုတင်ပြထားတယ်၊ အဲဒါဟာထောက်ခံ / ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ဖို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ လူတွေကဒါကိုသိပြီးတုံ့ပြန်ကြတယ်။